बुधवार दुई लघुवित्तको साधारणसभा : लाभांश पारित गर्दै, कुनको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > वित्त > बुधवार दुई लघुवित्तको साधारणसभा : लाभांश पारित गर्दै, कुनको कति ?
बुधवार दुई लघुवित्तको साधारणसभा : लाभांश पारित गर्दै, कुनको कति ?
काठमाडौं । बुधवार (चैत १८ गते) दुई लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले फरक–फरक स्थानमा साधारणसभा गर्ने भएका छन् । उक्त दिन मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था र महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सभा गर्ने भएका हुन् ।
२०७७ चैत्र १६ गते १७:१२ मा प्रकाशित
२८ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई दाेस्राे पटक सीआईपी सम्मान